कपाल काट्ने कैंची कसरी सफा गर्ने जापान कैंची - कतरनी काट्ने बाट फोहोर हटाउनुहोस्
स्टेनलेस स्टील अक्सर ब्लेड उपकरण बनाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ। ब्लेड हतियार र उपकरणहरु चाकू, कैंची, र तरवारहरु सामेल छन्। यी उपकरणहरु एक समय को लागी सजीलो संग काम गर्न सक्छन्। उनीहरु अन्ततः आफ्नो तेज र चिकनाई गुमाउँछन्। धारिलो ढु्गाहरु चाकूहरु तिखार्न प्रयोग गरिन्छ। यो कैंची को लागी मामला होइन।
यो सबै तल आउँछ कपाल काट्ने कैंची। कुरा फरक छ। नाई र कपाल काट्नेहरु प्राय कैंची प्रयोग गर्छन्। उनीहरुलाई नियमित चाहिन्छ मर्मत र सफाई। पेशेवर hairdressers सुझाव छ कि कैंची तेज र फरक सफा गर्नुपर्छ।
यद्यपि त्यहाँ धेरै DIY विकल्पहरु अनलाइन उपलब्ध छन्, यो सिफारिश गरीएको छैन कि तपाइँ ती सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको कैंची ब्लेड किनारहरु लाई हानिकारक समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ढुpen्गाहरु तिखार्न, जबकि उनीहरु उपयोगी छन्, केहि गर्न को लागी छैन। यी विशेषज्ञ सुझावहरु पालना गर्नुहोस्। यहाँ केहि महान र सजिलो तरीकाहरु छन् तिखार्ने र घरमा तपाइँको कैंची सफा गर्नुहोस्।
यदि तपाइँको कपाल काट्ने कतरनी भाँचिएको छ, वा फोहोर र मरम्मत बाहिर, तपाइँ कपाल काट्ने कतरनी को एक नयाँ जोडी किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ!
तपाइँको कपाल काट्ने कैंची सफा गर्न को लागी तीन चरणहरु
यी कपाल काट्ने कैंची को लागी हाम्रो शीर्ष रेटेड हेरविचार निर्देशन हो। उनीहरु सुनिश्चित गर्दछन् कि तपाइँको कैंची प्रदर्शन र विश्वसनीयता संग एक जीवनकाल अन्तिम।
१. एक रक्सी आधारित सफाई एजेन्ट को उपयोग गर्नुहोस्
धेरै कपाल उत्पादनहरु गैर पानी मा घुलनशील सामग्री संग बनाइन्छ।
यो तपाइँको कैंची मा अवशेष को एक निर्माण को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ, जो प्रदर्शन काटने मा कमी को परिणाम हुन सक्छ।
यी उत्पादनहरु साबुन र पानी द्वारा हटाइएको छैन।
यो कुनै पनि अवशेष हटाउन को लागी Isopropyl रक्सी संग तपाइँको कैंची सफा गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ।
कागजी तौलिया मा केहि जोड्नुहोस्, र ब्लेड सफा र राम्ररी पखाल्नुहोस्।
रक्सी पनि कैंची सफा गर्नेछ।
तपाईंले प्रयोग गर्नु हुँदैन बार्बसाइड सफा वा तपाइँको कैंची sanitize गर्न।
नोट: गलत तनाव RSI (दोहोरिने तनाव चोटहरु) को कारण हुन सक्छ। यो कैंची प्रदर्शन कम गर्न र काट्ने किनारा को क्षति को कारण हुन सक्छ।
Isopropyl रक्सी ज्वलनशील हुन सक्छ र तातो हुनु हुँदैन।
छाला संग लामो समय सम्म सम्पर्क बाट बच्नुहोस्।
निगल नगर्नुहोस्, सास फेर्नुहोस् वा चबाउनुहोस्।
2. सफा गर्न एक Chamois कपडा प्रयोग गर्नुहोस्
A Chamois कपडा छाला कपडा को एक प्रकार हो। धेरैजसो कैंची सेट र किट एक रखरखाव किट कि एक कपडा तपाइँको कैंची सफा गर्न को लागी शामिल छ।
तपाइँको हत्केला मा chamois फ्लैट राख्नुहोस्।
आफ्नो ब्लेड को बाहिर पखाल्न chamois प्रयोग गर्नुहोस्।
आफ्नो ब्लेड को भित्री सफा गर्न chamois प्रयोग गर्नुहोस्।
यो प्रक्रिया पूरै अत्याधुनिक किनारा पोलिश।
यो धेरै एक रेजर stropping जस्तै छ। तपाइँ आफ्नो आफ्नै कपाल वा chamois काट्न सावधान रहनु पर्छ।
आफैलाई काट्न बाट बच्न को लागी अतिरिक्त सावधानी संग chamois को उपयोग गर्नुहोस्।
3. सफाई पछि तेल कैंची
यो प्रत्येक दिन आफ्नो कैंची तेल को लागी आवश्यक छ।
तेलले कैंची सफा राख्न मद्दत गर्दछ। यो कपाल र फोहोर पछाडि पछाडि तान्न अनुमति दिन्छ।
कैंची खोल्नुहोस् र ब्लेड बीच तेल राख्नुहोस्।
Camellia तेल प्रत्यक्ष घाम को बाहिर राख्नुहोस्।
4. कैंची तनाव समायोजन गर्न
कैंचीले औंलाको औंठी समातेको छ। सुझावहरु 12 बजे सीधा माथि औंल्याउनुहोस्।
अर्को हात लिनुहोस् र औंला औंठीहरु लिनुहोस्। अब, तपाइँको अर्को हात संग कैंची ब्लेड खोल्नुहोस् ३५ देखि ४५ डिग्री मा। तपाइँको औंला को औंठी को जाने दिनुहोस्, र कैंची आफैं बन्द हुनेछ।
सुझावहरु को बीच को अंतर लगभग 1cm-2cm हुनुपर्छ।
युक्तिहरु एक साथ थिच्नु पर्छ यदि कैंची पर्याप्त तंग छैन।
यदि सुझावहरु सँगै धेरै नजिक छन्, कैंची ढीला सम्म यो ठीक संग समायोजित छ।
युक्तिहरु र चालहरु जब तपाइँको कपाल काट्ने कतरनी सफाई
बाट सुरु गरौं आफ्नो कैंची सफाई। त्यहाँ धेरै सफाई विधिहरु छन् कि पेशेवर कपाल र नाईहरु को उपयोग गरीन्छ। कहिलेकाहीँ उनीहरु सुझाव दिन्छन् कि यो केवल कपडा को एक टुक्रा संग पोंछ। यो पर्याप्त छैन। तपाइँको कपाल काट्ने कैंची सफा गर्न को लागी, तपाइँ एक पेशेवर तरीका हो कि प्रभावी साबित भएको छ को उपयोग गर्नु पर्छ। यो तपाइँको कैंची सफा गर्न को लागी एक सजिलो र प्रभावकारी तरीका हो।
1. चित्र पातलो
डिश साबुन र पानी सबै गन्क को लागी पर्याप्त नहुन सक्छ र निर्माण गर्न सक्छ यदि बारम्बार प्रयोग गरीन्छ। बन्दुक हटाउन र क्षेत्र को हावामा एक रंग पतली प्रयोग गर्नुहोस्। कुनै चिपचिपा अवशेष हटाउन को लागी, रंग पातलो को उपयोग गर्नुहोस्। साथै, कुनै पनि फोहोर वा कालोको कैंची ब्लेड सफा गर्नुहोस्।
2. स्पंज प्रयोग
यो पनि तपाइँको कैंची को शर्त द्वारा निर्धारण गरीन्छ, सफाई उत्पादनहरु तपाइँ प्रयोग गर्नु पर्छ। कहिलेकाहीँ गोंद ब्लेड मा पाउन सकिन्छ।
कपाल काट्ने कैंची एक फ्लैट किनारा छ, र यो यो कपास बल र तरल समाधान को उपयोग गरेर सफा गर्न को लागी सजिलो बनाउँछ।
तपाइँ ब्लेड सफा गर्न स्पंज को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यसको नराम्रो पक्ष। यदि ब्लेडहरू खिया लाग्छन्, तपाइँ उनीहरुलाई पखाल्न कपासको बल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कपास बल सेतो शराब सिरका मा भिज्नु पर्छ।
3. तेल काट्ने ब्लेड
यदि तपाइँ तपाइँको कैंची सफा र तेज हुन चाहानुहुन्छ, ब्लेड को बीच संयुक्त तेल आवश्यक छ। एक नरम कपडा संग पेंच क्षेत्र तेल। यो तेल प्रत्येक महिना दोहोर्याउनु पर्छ। यो सुनिश्चित गर्दछ कि ब्लेड सजीलो र घर्षण बिना काम गर्दछ। तेल को एक सानो मात्रा को उपयोग गर्नुहोस्, तर ब्लेड बाट सबै तेल हटाउन को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई पुन: प्रयोग गर्न शुरू गर्नु अघि।
तपाइँ सफाई पछि तपाइँको कैंची किन तिखार्नु पर्छ
१. काट्ने ढु्गा
एक sharpening उपकरण घर मा तपाइँको कपाल काट्ने कैंची तिखार्ने सबै भन्दा राम्रो तरीका हो। यदि तपाइँको कैंची ठीक तरिकाले काम गरीरहेको छैन, र तपाइँ कुनै पनि क्षति को कारण बनाउन चाहनुहुन्न, यो एक पेशेवर लाई कल गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ।
यो तपाइँको कैंची पेशेवर तेज छ, तर तपाइँ पनि घर मा एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक whetstone को रूप मा जानिन्छ। पत्थर को सतह सफा गर्न तेल वा सादा पानी को उपयोग गर्नुहोस्। टिप बाट आधार सम्म, पत्थर को लम्बाई संग कैंची को काटने किनारा ट्रेस। लाई आफ्नो कैंची तिखार्नुहोस्, तपाइँ लगभग 15 स्ट्रोक को उपयोग गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ।
२. विद्युतीय रोटर उपकरण
एक रोटरी उपकरण अर्को शान्त, कुशल तरीकाले घरमा तपाइँको कैंची तिखार्ने तरीका हो। यो बिजुली उपकरण तपाइँको काट्ने कैंची sharpening को लागी आदर्श हो। Vise कैंची ब्लेड दबाना को लागी प्रयोग गरीनु पर्छ। रोटरी उपकरण एक पीसने व्हील संलग्न गर्नुहोस्। यसको बिरूद्ध चक्की ढु्गा राखेर मोटर खोल्नुहोस्। यो प्रक्रिया दोहोर्याए पछि, तपाइँ एक तेज कैंची पाउनुहुनेछ।
तपाइँको काट्ने कैंची ब्लेड तिखार्न को लागी, तपाइँ एक सिलाई पिन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पिन काट्न सुरु गर्न कैंची प्रयोग गर्नुहोस्। कैंची बन्द हुनाले, यो बन्द गर्नुहोस् र पिन बिस्तारै ब्लेड बाहिर पिन स्लाइड।
तपाइँ यो प्रक्रिया जारी राख्न सक्नुहुन्छ जब सम्म तपाइँ एक तेज कैंची अत्याधुनिक छ। कुनै पनी धातु बिट्स हटाउन को लागी, ब्लेड कपडा को एक टुक्रा संग पखाल्नुहोस् पछि तपाइँ ती शार्पनिंग समाप्त गरीसकेका छन्। धातु बिट्स ब्लेडमा टाँस्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँ यसलाई सिलाई सुई संग तिखार्नुहुन्छ। तिनीहरू चोट र खतरा पैदा गर्न सक्छन्। तपाइँको कैंची ब्लेड तीखाईएको छ पछि उनीहरु बाट छुटकारा पाउन सुनिश्चित गर्नुहोस्!
यी तपाइँको कैंची ब्लेड तिखार्ने सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा प्रमाणित तरिका हो। यी विधिहरु तपाइँको कैंची ब्लेड को लागी गम्भीर चोट लाग्न सक्छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्। सुनिश्चित गर्न को लागी कि तपाइँको कैंची सुरक्षित र सफा छ, ध्यान दिएर यी सुझावहरु को पालन गर्न निश्चित हुनुहोस्।
पेशेवरहरु को सिफारिश छ कि तपाइँ नियमित रूप बाट सफा र हुनुहुन्छ आफ्नो काट्ने कैंची कीटाणुरहित। यो मात्र शीर्ष काम क्रम मा आफ्नो कतरनी राख्न र तिनीहरूलाई लामो समय सम्म बनाउन, तर यो पनि स्वच्छता कारणहरु को लागी धेरै राज्यहरु द्वारा आवश्यक हुनेछ। उचित भण्डारण र प्रयोग तपाइँको कैंची को रखरखाव को लागी महत्वपूर्ण छ।
राम्रो संग आफ्नो कपाल काट्ने कतरनी सफाई सफा गर्नुहोस्
दैनिक सफाई र सेनिटाइजिंग कपाल काट्ने कतरनी मर्मत को लागी आवश्यक छ। प्रत्येक सैलून र नाई पसल कतरनी सफाई को लागी यसको आवश्यकताहरु हुनेछ।
यी पूर्ण सफाई प्रक्रियाहरु अक्सर आवश्यकता छ कि तपाइँ सफा र ग्राहकहरु को बीच कैंची कीटाणुरहित। यो एक राम्रो विचार हो कि एकै समयमा कतरनी संग कपाल काट्ने छैन। यो कपाल टुक्राहरु नाई वा हेयर स्टाइलिस्ट द्वारा काट्न बाट रोकिनेछ। कतरनी पानी, सफाई समाधान, वा पसीना संग सुक्नु हुँदैन। यो कतरनी सुस्त र कलंकित बनाउन सक्छ।
कपाल काट्ने कैंचीको उचित सफाईमा उनीहरुलाई साबुन र पानीले धुनु पर्छ। सुख्खा पछि उनीहरुलाई सफा पानी संग कुल्ला गरीन्छ। अन्तमा, एक quaternion वा अल्कोहल स्यानिटाइजर समाधान कतरनी कीटाणुरहित गर्न को लागी प्रयोग गरीनु पर्छ। धुने र सुख्खा पछि, एक आटोक्लेभ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
दिनभरि नियमित सफाई र सरसफाइ, त्यसपछि दैनिक आफ्नो कपाल काट्ने कैंची तेल राम्रो स्थिति मा राख्नेछन्।
तपाइँको ब्लेड तेल लगाउने हुनेछ आफ्नो कैंची जीवन लम्बाउनुहोस् र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरु राम्रो परिचालन क्रममा छन्।
नाई र कपाल काट्नेहरु अक्सर एक लामो दिन पछि आफ्नो कतरनी तेल। यसले कतरनीलाई जंग लगाउने र कडा पार्ने, चिकनी, नियन्त्रण, र कुशल कपाल काट्ने को लागी अनुमति दिन्छ।
कडा वा जंग खाएको कतरनी पेशेवर को लागी हात असुविधा र ग्राहक को लागी एक गरीब कटौती गर्न सक्छ। कपाल कतरनी तेल कपाल काट्ने कैंची को भित्री भाग बाट कुनै पनि अटक कपाल वा अन्य मलबे हटाउन मद्दत गर्दछ। यो 45 डिग्री कैंची खोल्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ। त्यसपछि, मध्य संयुक्त मा कतरनी तेल को एक सानो मात्रा राख्नुहोस्।
यसले ब्लेड एकसाथ समात्नेछ। तपाइँको काट्ने ब्लेड किनारहरु र कैंची को सपाट पक्षहरु मा तेल रगर्न एक नरम कपडा को उपयोग गर्नुहोस्। यदि उनीहरु धेरै तैलीय छन् भने कतरनी फिसलन सक्छ।
ठीक संग तपाइँको काट्ने कैंची स्टोर
तपाइँको कपाल काट्ने कतरनी को रक्षा र सुख्खा गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरीका उनीहरुलाई सफा गर्नु हो, सुकाउनु होस्, र त्यसपछि उनीहरुलाई तेल। यो आफ्नो उपयोगी जीवन लम्बाउने र तपाइँ आफ्नो प्रदर्शन कायम राख्न मद्दत गर्नेछ। एक पटक तपाइँको कतरनी सफा र सुरक्षित गरीएको छ, तपाइँ एक तत्वहरु बाट उनीहरुलाई बचाउन को लागी एक शोषक, नरम अस्तर संग एक सुरक्षात्मक मामला मा भण्डारण गर्नु पर्छ। यो मद्दत गर्दछ यदि तपाइँ आफ्नो कतरनी आफ्नो भण्डारण बक्समा राख्नुभयो। तपाइँ जोखिम चलाउनुहुन्छ कि ब्लेड क्षतिग्रस्त हुनेछ यदि कतरनी वा अन्य उपकरणहरु एक अर्का मा दस्तक। केस सुक्खा राख्नुहोस्।
गहिरो निर्माण बाट बच्न को लागी सही तनाव को उपयोग गर्नुहोस्
ब्लेड तीखो मात्र नभई प्रयोग गर्न सजिलो पनि हुनुपर्छ। कैंची को तनाव प्रभावित हुन सक्छ कि उनीहरु कसरी ह्यान्डल र काटिएका छन्।
धेरै धेरै तनाव ब्लेड र तपाइँको हात मा अधिक तनाव को लागी क्षति हुन सक्छ। एक गरीब कपाल काट्ने ढीला तनाव कैंची को परिणाम हुनेछ।
यो कपाल काट्न सक्षम हुनेछैन तर यसलाई मोडिनेछ। यो जरूरी छ कि तपाइँको कतरनी एक पेशेवर sharpener वा कम्पनी द्वारा तेज यदि उनीहरु सुस्त हुन्छन्।
व्यावसायिक sharpening मतलब छ कि कतरनी ठीक उपकरणहरु र प्रविधिहरु कि कैंची को लागी कुनै क्षति को कारण हुनेछैन प्रयोग गरी तीक्ष्ण गरीएको हो।
कपाल काट्ने कैंची महंगा छन् जसको मतलब हो कि तपाइँ उनीहरुको हेरचाह गर्न को लागी जब सम्म तपाइँ उनीहरुलाई बारम्बार किन्न चाहानुहुन्छ। हो, त्यो एक स्पष्ट कथन हो तर त्यहाँ धेरै ब्लगहरु यहाँ कसरी तपाइँको कपाल काट्ने कैंची सेट को ख्याल राख्ने बारे मा कुरा गरीरहेका छन्। यदि कसैलाई थाहा छैन कसरी यहाँ आएर आफ्नो कैंची को ख्याल राख्न को लागी, उनीहरु एक फरक पेशा को कोशिश गर्न चाहानुहुन्छ। तपाइँको कैंची सफाई तपाइँको रखरखाव को एक हिस्सा मात्र हो।
तपाइँको कपाल काट्ने कैंची सफा गर्न को लागी एक स्मार्ट बानी को विकास को लागी लाग्छ। मलाई के मन पर्छ कि तपाइँ यहाँ (सफा, तेल, शार्पन, र यति मा) को अनुसरण गरेर एक प्रोटोकल को विकास गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको दिन को हिस्सा बन्नु पर्छ जब यो तपाइँको कैंची सफा गर्ने समय हो।